Silicone akpụkpọ ahụ Manufacturers & Suppliers - China Silicone akpụkpọ ahụ Factory
Nkọwa ngwaahịa Ihe mpempe akwụkwọ silicone maka ụlọ ọrụ iko bụ isi ihe dị mkpa nke ụlọ ọrụ anyị nke raara onwe ya nye iji kwado iko ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ dịka ahịa ahịa si dị. Laminated iko agụụ oku eji agụụ ụkpụrụ, na-eme ka iko kpụ ọkụ n'ọnụ n'okpuru agụụ ọnọdụ, na ikuku mgbali, ka iko ke agụụ akpa enwee ewepu ikuku na-enweghị ike ime ka egosipụta, agụụ akpa bụ n'okpuru kpo oku na agụụ pumped ọnọdụ ime abụọ ma ọ bụ karịa iberibe iko na EV ...
Silicone roba mpempe akwụkwọ maka agụụ pịa Silicone roba mpempe akwụkwọ maka agụụ pịa e mere na-arụpụtara site anyị ụlọ ọrụ na-raara onwe ya nye na-akwado agụụ pịa dị ka ahịa ina. Silicone roba mpempe akwụkwọ maka agụụ pịa bụ a isi akụrụngwa nke agụụ pịa igwe, ọ ga-enwe a kpọmkwem mmetụta na film irè na-eji na-eri nke agụụ pịa. Silicone roba mpempe akwụkwọ maka agụụ pịa emepụta site anyị ụlọ ọrụ na-eji German dị ngwaọrụ, adopts ikenyeneke mbiet mmepụta ...
Ogo bụ ndụ nke ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ jikọtara njikwa ngwaahịa dị oke mkpa. Ọ nwere otu ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa njikwa, kwadebere na ụlọ ọrụ ngwaahịa ọkachamara, ụlọ nyocha, na ụlọ nyocha.
The pụrụ iche silicone efere maka laminated iko ụlọ ọrụ bụ a isi akụrụngwa nke anyị ụlọ ọrụ maka iko agụụ laminating oku dị ka ahịa ina.